Gbasara Anyị - Shaoxing Sich Cosmetics Packaging Co., Ltd.
Ihe ịchọ mma itienna
SHAOXING SICH COSMETICS mbukota Limited [Yuyao Langrun Plastic Factory] bụ ọkachamara emeputa nke plastic mbukota ngwaahịa na China, emi odude ke Yuyao obodo. Anyị ụlọ ọrụ kpam kpam na-ekpuchi banyere 1,000 square mita. anyị bụ ndị ọkachamara factort na-emepụta ntu Polish ite na ịchọ mma containers na zuru experience.we nwere ọtụtụ narị ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi.we nwere ike inye imewe logo na ebu service.our factory bụ na Zhejiang, Anyị nwekwara ọfịs na Guangzhou.
anyị na ngwaahịa ndị tumadi ịchọ mma plastic nchịkọta ngwaahịa. Ngwaahịa ndị ahụ na-ekpuchi: ite ude rọba na karama ude mmiri, karama acrylic ， PP / ite Ololo na karama comp compact na-eme mkpọ ， ntu na ngwa ngwa ndị ọzọ. Anyị tumadi obibi mbupụ na-edebere ndị ahịa, ma na-enye mbukota ngwọta maka ọtụtụ ndị a ma ama na ịchọ mma ụdị n'ụlọ na mba ọzọ.
N'ihi na ihe karịrị 10 afọ nke jikọtara rụpụta na imewe nka, anyị enweela ihe ịga nke ọma na-enye ndị ahịa anyị na ezi nkwakọ ngwọta na-hụ na-echebe ma na-ebuli ika ọnọdụ na ahịa.
Anyị nwere imewe ụlọ na imepụta otu, igwe eji achọ mma agba, akpịrị na-ebi akwụkwọ silk yana igwe na-ekpo ọkụ maka ịdebanye aha na ụdị dị iche iche maka ịmị ọkụ na igwe ọkụ. Ha niile ga-enye aka na ngwaahịa dị elu ma napụta ngwa ngwa maka ndị ahịa anyị.
Anyị na-enye ngwa ọrụ ọdịnala dị elu maka ụdị iji weta echiche ọhụrụ na ahịa. Ndị ọrụ injinia na ndị na-emepụta ụlọ ga-enyere gị aka n'echiche gị, ọrụ gị, nka na nhazi gị. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere gị aka ịnye ngwaahịa nke na-arụ ọrụ, nke ọhụụ, ma na-achọ ndị ahịa gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka nkwakọ ngwaahịa gị mee nke ọma, soro ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa SICH.
Adreesị: Ala nke 42, Baiguan Square, Shaoxing, Zhejiang, China
Creamchọ mma ude ite, Black karama jel Polish, Ihe Ude Ngosiputa Ngwa, Anya ude ite, Ngosiputa Ngwa Powder with Sifter, Cream Ololo Ngosiputa Ngwa,